Ny iPad Pro vaovao dia 1% haingana kokoa noho ny maodely 2018 | Vaovao IPhone
Ao amin'ny Podcast iPhone News, naneho hevitra matetika izahay, ny tsara indrindra dia ny nanombohan'ny Apple ny iPad Pro vaovao tamin'ny faramparan'ity taona ity, mba ampiharo ny chip A14 vaovao amin'ny kinova X, ny variant izay ampiasain'i Apple foana ao amin'ny pro Range.
Na izany aza, Apple dia nanao ny azy indray ary tamin'ity herinandro ity dia nanangana ny iPad Pro, iPad Pro izay tantanin'ny processeur A12Z, mpikirakira vaovao izay manampy mpanamory sary vaovao, mahatratra 8 ny totaliny, ho an'ny 7 tafiditra ao amin'ny A12X.
Ny fahafantarana an'io fampahalalana io dia azontsika an-tsaina izany ny fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana dia kely. Apple dia tsy mbola fantatra amin'ny fireharehana momba ny hafainganam-pandehan'ny fikirakirany. Manamboatra fampitahana fotsiny toy ny "Haingana be ny iPad Pro ka mamono ny ankamaroan'ny solosaina finday misy ankehitriny." Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia maniry fotsiny ny hisokafan'ny rindranasa sy hanatanteraka ny fizotrany amin'ny fomba haingana fa tsy ny hafaingan'ny hafainganam-pandehan'ilay processeur.
Ny fitsapana fampisehoana voalohany dia hita ao amin'ny AnTuTu ary asehon'izy ireo amintsika ny fomba ny iPad Pro vaovao dia somary haingana kokoa noho ilay maodely natombok'i Apple tamin'ny taona 2018, misy isa 712.218 705.585 sy XNUMX avy.
Tsy fantatsika ny antony nanapahan'i Apple hevitra tsy hampihatra ny processeur A13 izay hita ao amin'ny iPhone 11 ankehitriny fa ny variant X. Fa kosa, nampiasainy ny karazana A12X, azo alaina amin'ny maodely 2018, noho izany Tsy tokony hahagaga raha mitovy ny valin'ny fampisehoana.
Raha ny herin'ny sary, ny iPad Pro 2020 dia mahatratra isa 373.781 raha ny maodely 2018 dia 345.016, izany hoe fitomboana 8%. Ity fahasamihafana ity dia tsy noho ny mpanamboatra sary fanampiny amin'ny maodely 2020 ihany, fa koa amin'ny 2 GB RAM izay mampiditra ny faritry ny iPad Pro vaovao manontolo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny iPad Pro vaovao dia 1% haingana kokoa noho ny maodely 2018
Aza adino fa ny processeur A13 iPhone 11 ankehitriny dia efa nodinihina taloha niaraka tamin'ny A12X mivoaka miaraka amin'ny isa tsara kokoa.
Mbola tsy ny fahazoana ny paikadin'i Apple. Raha ny tenany manokana dia noheveriny fa ireo manana iPad Pro alohan'ny taona 2018 dia afaka manao ny diany amin'ity maodely vaovao ity mba hankafizany ny vaovao rehetra efa tafiditra hatramin'ny maodely 2018 sy bebe kokoa ...